PMC TV NEPAL :: कसले पाउला विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व ? कसले पाउला विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व ? - PMC TV NEPAL
प्रविधि Friday, 21 Aug, 2020
देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन भूमिका खेलेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल आउँदो भदौ २९ मा सकिन लागेको छ । सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त नगरे घिसिङले प्राधिकरणबाट बिदा पाउनेछन् ।
सरकारले उनलाई गत ०७३ भदौ २९ मा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । सरकारले घिसिङको कार्यकाल थप्ने–नथप्ने निर्णय नगरेको भए पनि प्राधिकरणमा नेतृत्व हत्याउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा पुग्नेहरुको ताँती सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्वअधिकारीहरुसँगै अन्य सरकारी अधिकारी पनि घिसिङले छाड्न लागेको कुर्सीको दौडमा छन् । कतिपय दावेदारले प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुसँग भेट बढाएको बताइन्छ ।
घिसिङ सरकारले पुनः जिम्मेवारी दिए थप एक कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व लिने सोचमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
कुनै बेला दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएपछि चर्चामा आएका घिसिङको कार्यकाल थप्नुपर्नेमा सर्वसाधारण एकमत छन् भने सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि, प्राधिकरणभित्रै उनलाई पुनः नियुक्त नगर्न चलखेल सुरु भइसकेको बताइन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।